Redirect/so Welcome to Christadelphians of Tanzania | Christadelphians of Tanzania
Kiristadhelfiyanis (Kalmad laga sameeyey Giriig oo u tagaan “ Walaalayaal Masiixiyiin ah”;cp. Koloshiyanis 1:2- “Walaalayaal Masiixi ah”) waa koox kiristiyaan ah oo ka sameysamey Boqortooyada Ingiriiska iyo Waqooyiga Maraykanka qarnigii 19aad. Magaca waxa sameeyey John Thomas, oo ahaa aasaasihii kooxda. Kiristadhefiyanisku waxay aaminsanaayeen aragti baaybal oo midnimo ah. Kooxda waxa badanaa lagu qayaxaa/sharxaa masiixiyiin yuhuud ah, madaamo ay caqiidooyin iyo rajooyink badan la wadaagaan yuhuuda; gaar ahaan balanqaadkii loo sameeyey Ibrahim, Isaxaaq iyo israa’iil halka ay sidoo kalena aaminsanyihiin in Ciise uu yahay masiixa la balanqaadey.
Inkastoo tirada xubinimada rasmiga ah aan la daabicin, Columbia Encyclopedia waxay bixineysaa qiyaas tiro 50,000 (kontan kun) oo Kiristadhelfiyanis ah, kuwaas oo ku kala firdhay qiyaastii ilaa 120 dal; waxa jira kiniisado la aasaasey ( ama ecclesias sida badanaa loogu yeedho) oo ku yaal in badan oo ka mid wadamadaasi, oo ay la socdaan xubno la go’doomiyey. Tirokoobyo ayaa laga helaa wadamadaas qaarkood.Qiyaasta xarumaha ugu badan ee bulshada Kiristadhelfiyaniska waa sidan soo socota: Boqortoooyada ingiriiska (18,000), Ustareeliya (9,987), Malawi (7,000), Maraykanka (6,500), Moosanbiik (7,500), Canada (3,375), New Zealand (1785), Kenya (1,700), Hindiya (1500), iyo Tanzania (100). Tani waxay tirada ka dhigeysaa ilaa iyo 57,000.